Moe Kai: Las Vegas
အပြန်ခရီးကတော့ သိပ်မချောမွေ.ခဲ့ပါ။ LA လေဆိပ်မှာ Bomb Alert နဲ. ကြုံနေလို. အလွန်ကြပ်တဲ့ လုံခြုံရေးနဲ. အတူ လေယဉ်တွေ နှောင့်နှေးတာရယ်။ အင်္ဂလန်ပြန်ရောက်တော့ အသစ်ဆောက်ပြီးခါစ London Heathrow Terminal5ရဲ. ပြဿနာတွေကြောင့် ပိုနှောင့်နှေးမှုတွေ ဖြစ်ရတာတွေပါ။ အမေရိက လေဆိပ် လုံခြုံရေးတွေရဲ. အကြောင်းကတော့ မကြာခဏ သူများပြောတာ ကြားရသလို၊ သတင်းမှာ Youtube တို.မှာလဲ မကြာခဏ တွေ.ရပါတယ်။ ဥပမာ အသက် ၈၀ကျော် အမျိုးသမီးကြီးက ဒီအဝတ်အထပ်ထပ်ချွတ် စစ်တာကို မကျေနပ်လို. ရေကူးဝတ်စုံနဲ. လေဆိပ်ကို လာတာ။ လက်တွန်းလှဲပေါ်က အမျိုးသား ခရီးသည်မှာ လုံခြုံရေးတွေရဲ့ အတင်းစစ်တာကြောင့် ရောဂါကြောင့် ထဲ့ထားရတဲ့ ဆီးအိတ်ကြီး ပေါက်ကျတာ။ ကလေးငယ်လေးတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်တဲ့ အထိ လုံခြုံရေးတွေက အကြာကြီး အတင်း စစ်ကြတာ တွေကစလို.ပေါ့။ သူတို. စစ်တာတွေပြောမှ ကျမ အရေးပေါ်ဌာနမှာ လုပ်တုန်းကတော့ ဘိန်းမှောင်ခို သယ်ချင်တဲ့သူတွေ စအိုထဲ ဘိန်းတွေ အထုတ်ကလေးတွေနဲ.ထဲ့ ခိုးသည်လာပြီး ရဲက ဖမ်းမိ ခေါ်လာတာတွေ သတိရမိပါတယ်။ ဘယ်လို နှိုက်ထုတ်ရသလဲ ဆိုတာတော့ ... အင်း ပြောလို.ကို မကောင်းလို. ဒီမှာဘဲ ဟိုရောက် ဒီရောက် စာတိုလေးကို ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။
Smiling tree from Bellagio hotel - I think
Indoor setting with imitated Sky and
Sometimes there're even faked rain and thunderclaps
Faked Sky again
I can assure its not in Paris
Bellagio hotel, i think
miniature Eiffel (Restaurant)
Again, this surely wan't in Egypt